ဆရာဝန်အယောင်ဆောင်ပြီး ဆေးခန်းဖွင့် ဆေးကုနေသူကို ဖမ်းဆီး (ဒီလို အယောင်ဆောင်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ?) – New Of Burmese
ဆရာဝန်အယောင်ဆောင်ပြီး ဆေးခန်းဖွင့် ဆေးကုနေသူကို ဖမ်းဆီး (ဒီလို အယောင်ဆောင်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ?)
ရပျကှကျအတှငျး၌ ဆေးခနျးဖှငျ့လှဈကာ စီးပှားရေးလုပျနသေော ဆရာဝနျအယောငျဆောငျသူကို ပွညျသူ့ရဲတပျဖှဲ့က ဖျောထုတျဖမျးဆီးအရေးယူလိုကျသညျ့ ဖွဈစဉျတဈခု ၃ မိုငျမွို့၌ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါတယျ။
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ လပှတ်တာမွို့နယျ၊ ၃ မိုငျမွို့၊ (၄) ရပျကှကျတှငျ ဒေါကျတာဝဖွေိုးအောငျ ဆိုသူဖှငျ့လှဈထားသော ဆေးခနျးမှာ ကုသခှငျ့လိုငျစငျမရှိကွောငျး သတငျးရရှိခကျြအရ နယျမွပေိုငျရဲတပျဖှဲ့က စုံစမျးဖျောထုတျခဲ့ကွောငျး ရဲမှတျတမျးအရ သိရပါတယျ။
ဒေါကျတာဝဖွေိုးအောငျမှာ တရားဝငျဆေးကုခှငျ့လိုငျစငျ ရှိ/မရှိ နှငျ့ ဆေးခနျးဖှငျ့လှဈရောငျးခခြှငျ့ လိုငျစငျ ရှိ/မရှိတို့ကို စဈဆေးပွနျကွားပေးပါရနျ ၃ မိုငျမွို့၊ ကုတငျ(၂၀၀)ဆံ့ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၌တာဝနျထမျးဆောငျနသေော ခရိုငျကနျြးမာရေးဦးစီးမှူးထံသို့ ဇနျနဝါရီ ၃ ရကျ၊ ရကျစှဲပါစာဖွငျ့ စဈဆေးပေးရနျအလို့ငှာ ပေးပို့ခဲ့ရာ၌
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ လပှတ်တာခရိုငျ၊ ကုတငျ(၂၀၀)ဆေးရုံကွီးအတှငျး လကျရှိတာဝနျထမျးဆောငျနကွေသော ဆရာဝနျမြားအထဲ၌ ဒေါကျတာဝဖွေိုးအောငျအမညျပါ ဆရာဝနျမပါရှိကွောငျး ခရိုငျကနျြးမာရေးဦးစီးမှူး၏ ပွနျကွားစာကို ဇနျနဝါရီလ ၅ ရကျ၌ ရဲတပျဖှဲ့ကလကျခံရရှိခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
ရရှိသညျ့အခကျြမြားအရ ဆေးကုသရောငျးခခြှငျ့မရှိဘဲ ဆရာဝနျအယောငျဆောငျပွီး ဒသေခံပွညျသူမြားအား ဆေးကုသပေးနသေော ဒေါကျတာဟုဆိုသူ ဝဖွေိုးအောငျ( ခ) စညျသူ (၂၇)နှဈကို ဖမျးဆီးပွီး ၎င်းငျးဖှငျ့လှဈထားသော ဆေးခနျးကို ပိတျစလေကျြ ပစ်စညျးမြားကိုလညျး သကျသအေဖွဈ ရဲတပျဖှဲ့က သိမျးဆညျးကာ မွနျမာနိုငျငံဆေးကောငျစီ ဥပဒပေုဒျမ – ၅၈ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့စဈဆေးလကျြရှိကွောငျး ၃ မိုငျမွို့ရဲတပျဖှဲ့ထံမှ သိရပါတယျ။
ရပ်ကွက်အတွင်း၌ ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ကာ စီးပွားရေးလုပ်နေသော ဆရာဝန်အယောင်ဆောင်သူကို ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ၃ မိုင်မြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ၃ မိုင်မြို့၊ (၄) ရပ်ကွက်တွင် ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင် ဆိုသူဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးခန်းမှာ ကုသခွင့်လိုင်စင်မရှိကြောင်း သတင်းရရှိချက်အရ နယ်မြေပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်မှာ တရားဝင်ဆေးကုခွင့်လိုင်စင် ရှိ/မရှိ နှင့် ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင် ရှိ/မရှိတို့ကို စစ်ဆေးပြန်ကြားပေးပါရန် ၃ မိုင်မြို့၊ ကုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူးထံသို့ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်၊ ရက်စွဲပါစာဖြင့် စစ်ဆေးပေးရန်အလို့ငှာ ပေးပို့ခဲ့ရာ၌
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ ကုတင်(၂၀၀)ဆေးရုံကြီးအတွင်း လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဆရာဝန်များအထဲ၌ ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်အမည်ပါ ဆရာဝန်မပါရှိကြောင်း ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး၏ ပြန်ကြားစာကို ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရရှိသည့်အချက်များအရ ဆေးကုသရောင်းချခွင့်မရှိဘဲ ဆရာဝန်အယောင်ဆောင်ပြီး ဒေသခံပြည်သူများအား ဆေးကုသပေးနေသော ဒေါက်တာဟုဆိုသူ ဝေဖြိုးအောင်( ခ) စည်သူ (၂၇)နှစ်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ၎င်းဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးခန်းကို ပိတ်စေလျက် ပစ္စည်းများကိုလည်း သက်သေအဖြစ် ရဲတပ်ဖွဲ့က သိမ်းဆည်းကာ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ ဥပဒေပုဒ်မ – ၅၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ၃ မိုင်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရပါတယ်။
Previous Article ထရမ့်အား နျူကလီးယားလက်နက် ကုတ်နံပတ်မပေးရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဌက တားမြစ်
Next Article ထရမ့်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့် စည်းရုံးရေးတွစ်တာအကောင့်များ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခံရ